I-Sarms AC-262356 Powder: All You Want To Know ... AASraw SARMS
I-Sarms AC-262356 Powder: All You Want To Know
/Blog/AC-262356/I-Sarms AC-262356 Powder: All You Want To Know
ezaposwa ngomhla 04 / 27 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo AC-262356.
Yonke into malunga ne-AC-262356 powder
I-1.Iziphi ii-SARMs powder?
I-2.Iziphi iiSARM Zisebenza (kwaye kutheni zingaba ngcono kune-steroids)
3. Xa Uthabatha i-SARM Powder?
Uhlolo lwe-Sarm 4.AC-262356
Ukusetyenziswa kwePowder 7.AC-262356
8.AC-262356 powder Isisombululo
9.Izixhobo ze-AC-262356 powder
10.Risk ye-AC-262356 powder
11.AC-262356 powder I-Reddit-CAS: 870888-46-3
12.Nokuthenga iPow-262356 powder?
Ividiyo ye-AC-262356 powder
I.Raw AC-262356 powder siseko Abalinganiswa:
igama: I-AC-262356 powder
I-molecular Formula: C18H18N2O
Isisindo somzimba: 278.34
umbala: I-White ukuya kwi-Crystal White Powder
1. Ziziphi ii-SARM powder?
I-SARM i powder yilezi zonyango ezenziwe ngokubanjelwa ukuba zineempembelelo ezifanayo zonyango lwe testosterone. I-SARMs powder ngamanye amaxesha inokufumaneka kwizongezelelo zondlo kodwa zihlala zidweliswe kwiindawo ze-intanethi njengezinto "zophando kuphela" okanye "i-steroids zomthetho" ngenxa yokuba azikho izithako zomthetho. Nini ukuthatha i-SARMs powder njengokongeza, kubalulekile ukwazi indlela yokulawula ixesha labo. Yingakho sixoxa ngexesha lokuthatha i-SARMs powder. Ixesha elifanelekileyo lingenza yonke impazamo ehlabathini.
I-SARM i powder ifutshane ukuba "i-modorators yokukhetha i-androgen." Le nkunkuma yenziwe yenzelwe ukuphazamisa umzimba ngendlela efanayo neyobugcisa be-testosterone okanye i-testosterone. Njengoko kuthethwe ngazo, i-SARMs powder ayinalo ngokomthetho. Akukho phando olwenziweyo olwenziwe kwi-steroids kwaye lunokubangela ukukhathazeka kweempilo ezininzi xa kungakhange kuthathwe ngokufanelekileyo. Iifayile ze-SAR zivumelekile ukuba zisetyenziswe kwimidlalo yezobugcisa, nangona xa ihlolwe ngokusondeleyo kwaye isetyenziswe ngokufanelekileyo, isetyenziswa rhoqo kwaye ithengiswa ukwakha umzimba.
I-SARM i powder ibonakaliswe ukuba ineempembelelo ezihle kwiimisipha kunye namanqanaba onke omandla. I-pro-hormones kunye ne-anabolic kunye ne-androgenic steroids zibonelela ngezi ziphumo, nangona kunjalo ii-SARM zinempembelelo embalwa. Ukuyidiliza, i-SARMs powder yimixube evimba okanye evuselela i-receptors eziphambili ngaphakathi kwimizimba yomzimba. Oku kunceda ukwandisa imiphumo emihle emzimbeni ngelixa kunciphisa imiphumo engathandekiyo. Oku kwahluka ngokuxhomekeka kwinqanaba lezenzo.
2. Indlela i-SARM isebenza ngayo (kwaye kutheni ingaba ngcono kune-steroids)
Ukusebenzisa i-steroids ukukhulisa i-hormone yakho kufana nokuzama ukwenza i-microchip kunye ne-sledgehammer. I-Steroids ikunceda ukuba wakhe isisulu ngokunyusa i-testosterone, okongeza ukwanda kweprotheni kwiiseli zakho, ukwakha imisipha kunye namafutha atshisayo. Oku kuthathwa njengecala le-anabolic le-steroids, kwaye likhulu.
Kodwa i-steroids idibanisa nesibindi sakho, iprotate yakho, intliziyo yakho, izitho zakho zesini (ezikhokelela ekugqibeleni ibhola kumadoda kunye nokwandiswa kwamabhinqa kubasetyhini), kunye nempawu zakho zesini zesibini (ukujongwa kwezwi, ukukhula kweenwele zomzimba, i-boobs yamadoda, i-acne, njl). Zonke ezi ziphumo zecala ziyinxalenye ye androgenic ye-steroids.
Umba kunye ne-steroids kukuba banomlinganiselo we-anabolic-to-androgenic we-1: 1. Oko kuthetha ukuba banokuthi, zithi, zinciphisa iibhola okanye zandise i-clitoris yakho njengoko zizokwakha imisipha - ngaphandle kokuba uthatha i-testosterone ye-bioidentical ukugcina amanqanaba e-hormone efanelekileyo, kunye nokunyamekela ngogqirha (ndenza oku iminyaka kwaye andizange ndibe nemiphumo emibi. Ungafunda malunga nokunyuka kwe testosterone apha).
Yilapho i-SARM innovation. Ziye zikhethe kakhulu kune-steroids, ukuziqhayisa nge-anabolic-to-androgenic ratios ziqala kwi-3: 1 kwaye iya phezulu njengoko i-90: 1. Oko kuthetha ukuba usenokufumana ukukhula kwemisipha kunye nokulahlekelwa kwexabiso, kodwa i-SARM ayinakukunika i-boobs okanye iphendule ibe yintombazana. Unokuthatha iiSARM ngomlomo. Akukho mfuneko yeenjini.
IiSARM nazo zomthetho, nje kuphela xa uthenga "kwiinjongo zophando kuphela." Uza kubona abathengisi beSARM zibandakanya abachasayo abanjenge "iinjongo zophando lebhu kuphela" kwaye "kungekhona ukusetyenziswa kwabantu." Bakwenza oku ukuba imeko iguqule, ngoko abangenayo ingxaki kunye noorhulumente.
Kukho malunga neeSARM ezili-12 kwiimvavanyo zonyango (zoluntu) okanye izilingo zangaphambi kwekliniki (zezilwanyana). Eli nqaku liza kubhalela i-pros and cons of the most popular ones. Kwakhona, oku kungaphezulu ngaphaya kweyona nto ininzi ye-biohacking ndiyicoca. Qhubeka ngokusemngciphekweni wakho.
Ngaloo ngqondweni, makhe sithethe ngeSARM yokuqala kwiluhlu: I-AC-262356 powder (I-CAS: 870888-46-3).
Kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo SARMs powder. Uphando olulungileyo kufuneka lwenziwe ngaphambi kokuthenga nayiphi na le steroids ukuze ukwazi ukukunceda ufikelele kwiinjongo zakho zokwakha umzimba. Ezi nkalo ze-SARM powder ziquka:
I-Andarine (S-4, GTx-007) I-CAS: 401900-40-1
I-Ostarine (MK-2866, GTx-024) I-CAS: 841205-47-8
I-Ligandrol (LGD-4033) I-CAS: 1165910-22-4
I-BMS-564929 CAS: 627530-84-1
I-AC-262356 powder I-CAS: 870888-46-3
I-JNJ-28330835 CAS: 888072-47-7
I-LGD-2226 CAS: 328947-93-
I-LGD-3303 CAS: 1196133-39-7
I-S-40503 CAS: 404920-28-1
I-S-23 CAS: 1010396-29-8
I-Cardarine (GW-501516) I-CAS: 317318-70-0
Njengazo zonke izongezo, kubaluleke kakhulu ukwazi ixesha kwaye njani ukuthatha i-SARMs powder. I-Steroids ingaba yinto ekhohlakeleyo kuba iyakuthi ithathwe kwiimjikelezo kwaye idinga ukuthathwa ngokufanelekileyo. Emva kokuba ugqibe ukuba yiphi i-SARMs powder ofuna ukuyisebenzisa, kufuneka uqonde ukuba yeyiphi umjikelo ofuna ukuyilandela. Nangona ixesha elifanelekileyo xa uthabatha i-SARM yakho powder ngexesha lusuku alukhathazeki, kubalulekile ukuba uyazi ukuba ngubani oza kuthatha imihla ngemihla. Musa ukwenza njalo.
Njengawo onke ama-steroids, i-SARMs powder kufuneka ithathwe kuphela ngabantu abadala okanye ngaphezulu kwe-21 ubudala.
Emva koko, siza kufaka i powder eyaziwayo kwi-sarm powder-AC-262356-powder (i-CAS: 870888-46-3). Ngenye ye-SARM ezinamandla kwi-bipayipi, kwi-2 / 3rds kuphela. njengesiphumo (ngokubuthathaka + esinqabileyo) usenokungabonakali. Izinto ezifana nalezi zihamba phantsi kwe-radar lonke ixesha. Ngaphezulu, andizange ndibone umntu ovavanya ngayo, okanye afunde nawaphi na amanqaku ezesayensi achaza ukuphuhliswa kwegazi okanye umchamo. Ndithembele ngokuqinisekileyo ukuba le powder ye-SAR ayibonakali. Yaye masibe nethembekile, ngelixa u-bodybuilder oqeqeshiweyo engafuneki into ebuthakathaka kune-testosterone, nawuphi na umdlali osemthethweni (ohlolwe ngamachiza) uza kufumana umda ophezulu kule ndawo.
4. I-AC-262356 powder Ukuphononongwa kweSarm
Ezi ziphumo zibonisa ukuba le ngxube inokuba luncedo kwimizi yesibini yomzimba kunye nokulawula amanye amahomoni.
5. I-AC-262356 Powder
igama I-AC-262356 powder
I-Mass Mass 278.348 g / mol
ICompe Formula C18H18N2O
Igama leKhemikhali 4-(3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)naphthalene-1-carbonitrile
Iimpawu ezifanayo ze-AC-262356 powder AC-262356 powder CHEMBL468938, SCHEMBL4879629
yoGcino Iqondo lokushisa
I-Organoleptic Profile Enhle umgqomo omhlophe, iFom Form Form Solid
iingxelo IAAA, HPLC
ngokwemiqathango Iimveliso esinikezelayo zenzelwe ukusetyenziswa kophando lwebhubhoratri kuphela.
Nceda uzifunde ngeMigqaliselo neMibandela yethu ngaphambi kokuyalela.
I-AC-262356 powder (i-CAS: i-870888-46-3) yinkomfa eyenza i-modorator ye-androgen ye-receptor. I-Chemically ine-endo-exo isomerism, kunye nefom ifom ibe yindlela esebenzayo.
6. Indlela yokusebenza- I-AC-262356 powder
-4- (3-Hydroxy-8-aza-bicyclo [3.2.1] i-octyl) -naphthalene-1-carbonitrile (i-AC-262356 powder) yenza njenge-agonist eyingxenye ye-androgen receptor nge-Ki ye-5nM, kwaye akukho nxu lumano nawaphi na amanye amavumli ahlolwe.
-Izifundo zezilwanyana zavelisa umphumo omkhulu we-66% yesenzo se-anabolic se testosterone, kodwa kuphela nge-27% yombono wayo njenge-androgen.
I-AC-262356 powder ibonisa akukho mboleko kwezinye iiforsi ezifana ne-steroid receptors estrogen ER, i-glucocorticoid GR, i-mineraloid MR, kunye ne-progesterone PR.
7. Ukusetyenziswa kwePowder ye-AC-262356
I-AC-262356 powder yinkomfa eyenza i-modorator ye-androgen ye-receptor. I-Chemically ine-endo-exo isomerism, kunye nefom ifom ibe yifom esebenzayo.
Ngenxa yokunciphisa kunye namatyala e-testosterone zokwelapha, ama-modulator angenayo i-non-steroidal-selective and receptor-receptor angayinika ithuba lokunyanga ngokuthe tye. Ukusebenzisa i-assay esekelwe kwi-cell e-AC-262356 powder yachongwa njenge-AR ligand enamandla kwaye ekhethiweyo, kunye nomsebenzi we-agonist ohambelana ne-androgen testosterone. I-2-iveki eqhubekayo kwizigulane zamadoda ezixutywe zibonise ukuba i-AC-262356 powder iphucula kakhulu imilinganiselo ye-anabolic kulezi zilwanyana, ngokukodwa ekukhuthazeni ukukhula kwe-levator ani kunye nokunciphisa amazinga aphezulu e-LH. Ngokuphambene kakhulu ne testosterone, STEALTH (i-AC-262356 powder) ineempembelelo ezinobuthakathaka kunye ne -rogenic, njengoko zilinganiswe ngeprotate kunye nezisindo ze-vesicle weight. Ngaloo ndlela, i-AC-262356 powder ibonisa iklasi yenombolo ye-androgen receptor-modulators (SARMs) ezichanekileyo kunye neempembelelo ze-anabolic.
I-AC-262356 powder enye yeyona i-SARM enamandla kwi-spectrum, kwi-2 / 3 nje ye-anabolic pottery ye-testosterone ... kodwa ayinqabile, kwaye ngenxa yoko (ngokubuthathaka + engabonakaliyo) ayisabonakali. Asizange sibone nawuphi na umntu ovavanyayo, okanye afunde nantoni na isayense echaza ukuphuhliswa kwegazi okanye umchamo. Sithemba ngokuqinisekileyo ukuba le SARM ayisabonakali. Yaye masibe nethembekile, ngelixa u-bodybuilder oqeqeshiweyo engafuneki into ebuthakathaka kune-testosterone, nawuphi na umdlali osemthethweni (ovavanyo oluchithwe yiziyobisi) uya kufumana umda okhululeke kule powder-ACN 262356.
Nangona I-AC-262356 powder kuthathwa njengobunyameko ngaphezu kweSARM ezidumileyo, amandla alo okwenene aphantsi kwinto yokuba isenza umsebenzi osondeleyo kunye ne-androgenic. Oku kuthetha ukuba kubangele iingozi ezimalunga nakwabesifazana abafuna ukufumana umda ophakamileyo ngokukhula kwemisipha kunye namandla, kodwa abafuni umngcipheko wokuhlakulela iimpawu zesintu ezingathandekiyo ezifana nokukhawuleza, ukukhula kweenwele ezingafunekiyo, ukunyaniseka kwezwi njl njl.
Kuze kube ngoku, enye yezithuba ezimbalwa ezikhethiweyo ezifumaneka kumqhubi wesifazana nguAnavar - owaziwayo onomdla we-steroid oza kunye nohlu lwazo lwemiphumo emibi.
8. I-AC-262356 Inkompo yePowder
Qaphela: inkcazelo yokulinganisa iinjongo zenzululwazi kuphela. I-SARM Central, ayikuvumeli ukusetyenziswa komntu okanye ukusebenzisa le nto ngaphandle kwendalo yesayensi elawulwayo.
Njengesikhokelo esiqhelekileyo sichaza 'ukuvavanya' i-SARM entsha malunga ne-10-15 mg ngosuku kwaye ubone indlela umzimba wakho uphendule ngayo. Ukuba awunayo nayiphi na imiphumo emibi okanye iziphumo unako ukuqala ukwandisa umyinge nge-10mg ngosuku.
9. Iinzuzo ze-AC-262356 Powder
Mhlawumbi umphumo omhle kakhulu we-AC-262356 powder yikwazi ukukhulisa ukukhula komzimba. Uphando lubonisa ukuba iigundane ezifakwe ngelolu hlobo lwe-SAR zifumana ukukhula okukhulu kwemisipha ye-66% xa kuthelekiswa nokufakwa kwe testosterone.
Ezinye iifowuni ze-AC-262536 zefowuni ziquka:
Ukunceda ukuphucula umsebenzi we-hippocampus (oya kugcina ukuqala kwesifo se-Alzheimer)
Yaye inokuthintela isifo somhlaza wesibeletho. Ukuvavanya kwedatha kubonisa ukuba le SARM inokuyithintela umsebenzi we-dihydroxytestosterone (DHT) kwi-cell prostate cell cell.
Iingcali zenzululwazi nazo zafumanisa ukuba Iimpembelelo ze-AC-262356 ye powder ukugcina ubukhulu beprotrate ubukhulu be-14x buthathaka kuneleyo ye testosterone.
10. Ingozi ye-AC-262356 Powder
Imveliso ye testosterone
Ukukhula kweenwele zomzimba ezingafunekiyo
Ukukhula kwesifuba samadoda
11. I-AC-262536 I-CAS: I-870888-46-3
12. Kuphi Ukuthenga I-AC-262356 Powder?
I-AASraw ingumthombo ophezulu:
I-AC-262356 powder Isixazululo
13. ISatifikethi se-Analysis-AC-262356 powder
14. Iingcamango zokugqibela
I-AASraw inikezela ngomgangatho ophakamileyo kunye nokuhlambuluka okukhulu sarms powder kwaye ezininzi izakhiwo zomzimba zithola i-sarms powder kwi-AASraw ngokuthe ngqo, Unokwenza oko ukuba ufuna.
Ngenxa yokuba basha, i-powder sarm ithwala ingozi ngakumbi kunezona zinto ndizithethayo kule bhulogi. Oku kuninzi ngaphandle ngaphandle kokutya isidlo se-Bulletsproof okanye ukugubha ukulala kwakho. Qhubeka kwingozi yakho, sebenzisa isigwebo sakho, kwaye uphulaphule umzimba wakho.
Ngaba uzame i-sarms powder? Uya kuqala? Ukuba kunjalo, kuya kuba kuhle ukuba wabelana ngokulungileyo nokubi kwiingcamango ezingezantsi. Ndiyabulela ukufunda nokufunda ngakumbi malunga AASraw.
Thenga Ubungakanani beYK11: Iingcebiso kunye neziNzuzo kunye nemiphumo emibi
Iinzuzo zokusebenzisa i-MK-677 (Ibutamoren) ipowder yokwakha umzimba
I-IDRA-21 ipowder benefits	Izibonelelo eziphezulu ze-5 zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder